ne admin pane 20-05-27
Hunyanzvi hwekuita uye musimboti wekushanda wemagetsi emagetsi clutch yezvishongedzo zvemaski muchina. Iyo yemagetsi clutch chinhu chakakosha chekugadzira chemaskini muchina. Iyo yakanaka yemagetsi clutch inogona kuvandudza mashandiro ekushanda kweiyo mask muchina uye ...
Iyo chaiyo machining indasitiri yagara iri yebasa-inotyisa, capital-nyanyisa, uye tekinoroji-nyanyisa indasitiri. Iyo indasitiri ine yakakwira chikumbaridzo. Kunyangwe kana bhizinesi rese risingasvike pane imwe nhanho, zvichanetsa kuwana purofiti. Makambani makuru anogona kudzikisa mutengo ...
Ndezvipi zvikamu zvinokodzera kunyatsogadzirisa
Isu tinoziva kuti machina ekushambadzira ane yakanyanya kudikanwa kuti iite nemazvo, chaiyo machining ine kuomarara kwakanaka, yakakwirira yekugadzira chaiyo, uye chaiyo chishandiso kumisikidza, saka inogona kugadzirisa zvikamu neakanyanya kunyatsoita zvinodiwa. Saka ndezvipi zvikamu zvinokodzera kunyatsogadzirisa? Izvi zvinotevera ...